हार्दाहार्दै किन लडिरहन्छन् रामचन्द्र ? | Diyopost - ओझेलको खबर हार्दाहार्दै किन लडिरहन्छन् रामचन्द्र ? | Diyopost - ओझेलको खबर
हार्दाहार्दै किन लडिरहन्छन् रामचन्द्र ?
bestnp बुधबार, चैत्र २४, २०७२ | १३:०३:४४
बुढो हुन्जेलसम्म लड्नुपर्ने दक्षिण एशियाकै रोग हो : लोकराज बराल
उहाँले कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न जान्नुहुन्न त्यसैले हार्नुभयो : रामहरी खतिवडा
काठमाडौं, २४ चैत्र । कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा रामचन्द्र पौडेल भारी मत सहित पराजित भएका छन् । यो पराजयसँगै रामचन्द्र पौडेललाई ‘हारको पर्यावाची’को रुपमा चित्रित गरिन थालिको छ । १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजित बनेका पौडेल केही दिन अघि सम्पन्न पार्टीको १३ औं महाधिबेशनमा पनि तत्कालीन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग भारि मतले पराजित बनेका थिए । कांग्रेस भित्र हारको ‘उपाधी’ चुनेका पौडेलमाथि विभिन्न टिप्पणीहरु हुने गरेको थियो । त्यसो त राजनीतिलाई संभावनाहरुको खेल भनिन्छ तर पौडेल भने अपवाद जस्तै बनिरहेका छन् ।
किन किन हारिरहन्छन् रामचन्द्र पौडेल ?
चुनावमा हार्छुभन्ने जान्दा जान्दै पनि उनी लडिरहनुको पछाडी कारण बारे प्रध्यापक लोकराज बराल दक्षिण एशियाकै समस्यासँग जुधाउँछन् ।
‘मान्छेहरुमा आफूले गरेको लगानीको कुरा हुन्छ । मौका र संयोगले मान्छे उम्कीन पनि सक्छ भनेर चुनाव लडिरहन्छन्,’ बराल भन्छन्, ‘जित हार जे भएपनि ६७ भोट पाउनु भनेको पनि ठूलो कुरा हो । एउटा सिट जित्ने त मन्त्री भएका छन् । उहाँलाई आफ्नो लगानीको मायाँ पनि छ ।’
उनी यसलाई दक्षिण एशियाकै राजनीतिक परम्पराको रुपमा चित्रित गर्छन् । ‘यो नेपालको मात्रै होइन दक्षिण एशियाकै राजनीतिक परम्परा हो । बुढो हुन्जेलसम्म चुनाव लड्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बेलायत वा युरोपमा एक पटक चुनाव हारेपछि भाग लिँदैनन् । टोनि ब्लेयरले पनि छोडे । हिजो भरखरै आईसल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले ‘पानामा पेपर्स’को विषयलाई लिएर राजिनामा दिए ।’
त्यसो त शेरबहादुर पनि पटपटक हारेका नेता हुन् । वंशको एक छत्र राज गरेका कोइराला परिवारबाट उत्पीडनमा पर्दै आएका देउवाको शिकारमा यतिबेला भने रामचन्द्र परेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतिवडा पौडेलले कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्, ‘उहाँले अफ्टेरो परेको बेला कार्यकर्ताको संरक्षण नगरेको हो की, भन्ने मलाई लाग्छ’ दियोपोस्टसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘उहाँसँग दृष्टिकोण पनि छ । स्पष्ट बक्ता पनि हुनुहन्छ । तर त्यो भावना छैन ।’ खतिवडा अब पौडेलले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्ने बताउँछन् ।
‘उहाँले अब पार्टीलाई पार्टी लाई एकता बद्ध बनाएर लैजानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो पार्टी भित्रको आन्तरिक चुनाव हो, यसबाट भागेर जाने ठाउँ उहाँसँग छैन ।
दलको निर्वाचन हुनुभन्दा दुई दिन पहिला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौंको एक पार्टी प्यालेसमा गोप्य भेलाको गरेका थिए । उनी निकट सांसदहरुले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो । भेलामा करिब ७० जना पौडेल निकट सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उनीनिकट करिब ५० जना सांसद अनुपस्थित रहेको भन्दै पौडेलको जित सुनिस्चित भएको अनुमान विपरित निर्वाचनमा भने उनीमाथि घात भएको बताइएको छ ।
कुल २०६ मत खसेकोमा देउवाले १३९ तथा पौडेलले ६७ मत ल्याए । यसरी हेर्दा पौडेलका आफ्नै भनिएकाबाट उनलाई धोका भएको देखियो ।
संसदीय दलको नेतामा जित्नका लागि २०७ मा १०४ मत ल्याए पुग्छ तर, देउवा पक्षले १३० कटाउने दाबी गरेको थियो ।
फागुनमा सम्पन्न महाधिबेशनमा पराजित बनेपछि उनले हार्नुका विभिन्न ६ कारणहरुलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले त्यतिबेला यसरी प्रकाशित गरेको थियो ।
१. रामचन्द्र पौडेलको पहिले पनि पकड थिएन अहिले पनि बनाउन सकेनन् । कांग्रेसमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका प्रस्ट र बलिया गुट थिए । नेतात्रयका रूपमा रामचन्द्र पौडेलको नाम आउने गरे पनि उनको छुट्टै गुट थिएन । गिरिजाप्रसाद र सुशीलसाग टक्कर लिएर वैकल्पिक नेताको छवि बनाएका देउवाले यसपालि हरेक प्रतिनिधिलाई नामबाटै सम्बोधन गरेर पत्रसमेत लेखे । राजनीतिमा पाएको सुख–दुस्खको कदर गर्दै देउवाको हस्ताक्षरसहितको पत्र पाएपछि प्रतिनिधि उनीप्रति सकारात्मक भए । तर, पौडेलसाग त्यस्तो लोकप्रिय रणनीति थिएन ।
२. सहयोगीको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापनमा पौडेललाई झमेला स्सुशीलको निधनपछि कार्यबाहक सभापति बने, तर संस्थापनका सबैले मान्ने नेता हुन सकेनन् । बरु, महाधिवेशनको मुखमा प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, सुजाता कोइरालाहरूले आफू नै संस्थापनको नेता भएको जिकिर गर्दै सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरे । उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापनमै पौडेलले अन्तिमसम्म मिहिनेत गर्नुपर्योम ।
३. देउवाले संस्थापनका नेता ताने,पौडेलले सकेनन् स्कार्यबाहक सभापति भइसकेपछि पनि पौडेलले संस्थापन पक्षका नेताहरूलाई जोगाउन सकेनन् । संस्थापनमै रहेका अर्जुननरसिंह केसी, कुलबहादुर गुरुङ, गोविन्दराज जोशी, लक्ष्मण घिमिरेदेखि फरमुल्लाह मन्सुरजस्ता नेताहरू देउवातिर लागेपछि पौडेल स्वतस् कमजोर भए ।
४. सिटौलाको उम्मेदवारीस् मत र मनोविज्ञानको असर संस्थापन पक्षकै कृष्ण सिटौला सभापतिमा विद्रोही उम्मेदवार बने । गिरिजाप्रसाददेखि सुशील कोइरालासम्मको सचिवालय चलाएर कार्यकर्तासम्म पहुँच बनाएका र युवानेता गगन थापाले समेत विश्वास गरेका सिटौलाले यथेष्ट मात्रामा पौडेललाई क्षति पुर्याबए । सिटौलाले प्राप्त गरेको मतले मात्र होइन, उनको उम्मेदवारीले सिर्जना गरेको मनोविज्ञानले पनि पौडेललाई क्षति पुर्यालयो ।
५. देउवा समूह एकजुट,पौडेलले समूहमै महत्त्व पाएनन् देउवा समूहको पहिलो प्राथमिकता सभापतिमा देउवाको जित सुनिश्चित गर्नु थियो । सबै उम्मेदवारले सभापतिमा देउवाको प्रचार गर्दै आफ्ना लागि पनि मत मागे । तर, पौडेल समूहका नेताले सभापतिका लागि मत मागेनन्, आफ्ना लागि मात्र मागे । आफ्नै समूहका उम्मेदवारको पनि आस्था जुटाउन नसकेपछि उनी चुनावमा पछि परे ।
६. स्रोत र साधनमा पौडेल कमजोर, देउवा बलियो आमदिनहरूमा पनि स्रोत जुटाउने र वितरण गर्नेमा देउवा पहिलेदेखि नै अगाडि छन् । महाधिवेशनका वेला पनि उनले कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन सके । तर, पौडेल स्रोत जम्मा गर्ने र वितरण गर्नेमा पनि कमजोर देखिए ।
यी कारणहरु अहिलेको संसदीय दलको नेताको चुनावमा पनि अक्षरस पालना हुन्छ ।
वीपीका अनुयायीदेखि १३ वर्षे जेल जीवनसम्म
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर पौडेल नेपाली यस अघि भने काङ्ग्रेस संसदीयदलका नेता बनिसकेका थिए । माओवादी जनयुद्धपछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री बनेका उनले त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसकेका थिए ।
बी.पी. कोइरालाको सान्निध्य र त्यागबाट प्रभावित भई राजनीति तर्फ आकर्षित भएका पौडेलको राजनैतिक यात्रा विद्यार्थी अवस्थादेखि नै शुरु भएको हो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागेका कारण उनी पटकपटक गरी १३ वर्ष जेल परेका छन्। प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेका पौडेल पछिल्लो पटक एक वर्षसम्म नजरवन्दमा परेका थिए।
कांग्रेस भित्र उनलाई अध्ययन शिल नेताको रुपमा चित्रित गरिन्छ ।
बुधबार, चैत्र २४, २०७२ | १३:०३:४४